WhatsApp dia nohavaozina ho an'ny fitaovana Android sy iOS | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp dia nohavaozina ho an'ny fitaovana Android sy iOS
Raha ny momba ny mpampiasa Android, tonga tamin'ny 15 Oktobra ny fanavaozana farany ny fampiharana ary ny mpampiasa iOS dia nahita ny kinova farany an'ny fampiharana vonona amin'ny fisintomana omaly alina. Ao amin'ireo kinova roa amin'ny Android sy iOS, dia mahita fanatsarana mitovy amin'izany izahay ary ny tena marina dia miandalana ny fanavaozana ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra matetika matetika miaraka amin'ny fanatsarana mba hahafahan'ny mpampiasa misimisy kokoa amin'ny fampiharana. Nandritra ny fotoana lava be, WhatApp dia nitondra fanavaozam-baovao bebe kokoa miaraka amin'ny fanatsarana mahaliana ho an'ny mpampiasa ary izany dia zava-dehibe aorian'ny "olan'ny tsiambaratelo" an'ireo mpampiasa ity fampiharana ity.
EIreo no fanatsarana azontsika atao hita ao amin'ny fanavaozana farany ny fampiharana ho an'ireo mpampiasa Android ary mitovy amin'ny an'ny iOS izy ireo:
Ankehitriny ianao dia afaka manoratra na manampy lahatsoratra sy emojis amin'ny sary sy horonantsary vita amin'ny WhatsApp. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hatevin'ny borosy na endri-tsoratra amin'ny alàlan'ny fisintomana ny rantsan-tànanao ankavia amin'ny bara fandokoana
Ao anaty vondrona dia azonao atao izao ny manonona olona iray amin'ny fanoratana ilay marika
Ny admin. ny vondrona izao dia afaka mandefa rohy fanasana. Mandehana amin'ny fampahalalana. vondrona, tap Ampio mpandray anjara> Asao ny vondrona misy rohy
Rehefa mandefa emoji tokana ianao dia hiseho lehibe kokoa izao
Amin'ny teny ankapobeny, ny fanatsarana nampiharina tamin'ny fampiharana ary eo ho eo dia azontsika atao ny milaza fa mitovy amin'ny sehatra roa ireo, satria ny hany zavatra tsy hitantsika amin'ny fanavaozana ny fitaovana iOS dia satria efa avy amin'ny kinova taloha. Ny bibikely kely sy bibikely avy amin'ny kinova taloha dia raikitra ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » WhatsApp dia nohavaozina ho an'ny fitaovana Android sy iOS
Ny fiara Tesla dia hanana fahaleovan-tena 100% manomboka izao
Android Nougat 7.1 Beta dia tonga amin'ny fitaovana alefa